Liverpool Oo Difaac Cusub Heshay, Dele Ali Iyo PSG, Kooxaha Ku Tartamaya Saxiixa Maitland Niles Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay – Garsoore Sports
Liverpool Oo Difaac…
Suuqa kala-iibsiga cayaartooyda ee bishan Janaayo ayaa maraya maalmihii ugu dambeeyay, maalinta isniinta ee soo aadan ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah suuqa u xirmo, kooxuna waxay ka gaarsiinayaan xiritaanka suuqa kahor inay saxiixyadooda dhammeystiraan.
Haddaba waxaan idiin soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa oo maanta ay warbaahintu hadalhayso.
Liverpool ayaa qorsheyneysa inay amaah kula soo wareegto daafaca kooxda New York Red Bulls iyo xulka Mareykanka Aaron Long, oo 28 jir ah. (ESPN)
Kooxda ka dhisan Anfield ayaa qarka u saaran in sameeyso 72-ka saac ee ugu dambeysa suuqa kala iibsiga xilli dambe dalab ay kula soo saxiixaneyso daafac dhexe, kaddib markii daafacooda Joel Matip uu ku biiray liiska dhaawacyada. (Telegraph)
Real Madrid ayaa u dhaqaaqi doonta xagaagan saxiixa weeraryahanka France iyo Paris St-Germain Kylian Mbappe, oo 22 jir ah. (Marca)
Paris St-Germain ayaa dooneysa inay middeyso tababaraha kooxdooda Mauricio Pochettino iyo cayaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Dele Alli, oo 24 jir ah, iyadoo kooxda Ligue 1 ka dhisan ay kalsooni ku qabto in cayaaryahanka reer England uu kooxda sii joogo marka uu amaahda dhammeysto (Eurosport)
Kooxda reer Turkey ee Trabzonspor ayaa la rumeysanyahay inay heshiis la gaareen daafaca bidix ee kooxda Tottenham iyo xulka England Danny Rose, oo 30 jir ah (Talksport)
Xiddiga garabka uga cayaara kooxda Leicester City iyo xulka England Demarai Gray oo 24 jir ah ayaa heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Bundesliga ka cayaarta ee Bayer Leverkusen laakiin labada kooxood ayaa isku heysta lacagta lagu helayo iibkiisa. (Bild – Jarmal)
Daafaca reer Spain ee Sergio Ramos, oo 34 jir ah, ayaan weli heshiis cusub u saxiixin kooxdisa Real Madrid, bil kaddib markii labada dhinac ay kulmeen si ay uga wada hadlaan kordhinta qandaraaskiisa, kaasoo dhacaya dhamaadka xagaagan. (Marca)
Manchester City ayaa ku sii dhawaaneysa inay la soo saxiixato labada xiddig ee da ’yarta reer Brazil ee kooxda Fluminense, Kayky iyo Metinho, oo labaduba ah 17sanno jiro, heshiis ku kacaya 9 Milyan oo gini. (Goal)
Kooxda Manchester City ayaan xiiseyneynin inay baacsato daafaca Bayern Munich iyo Austria David Alaba, oo 28 jir ah inta suuqa bishan Janaayo ka hartay ama xagaaga,hayeeshee kooxda City ayaa diirada saareysa saxiixa weeraryahan cusub. (Manchester Evening News)
Southampton ayaa isku dayeysa inay heshiis amaah ah kula soo saxiixato daafaca Arsenal iyo England Ainsley Maitland-Niles, oo 23 jir ah kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga bishan Janaayo Isniinta soo aadan. (The Sun)
West Brom ayaa sidoo kale xiiseyneysa saxiixa Maitland-Niles, oo doonaya inuu boos joogta ah helo. (Mail)
Tababarihii hore ee Chelsea iyo Tottenham Andre Villas-Boas, oo 43 jir ah, ayaa la filayaa inuu ka tago Marseille dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Eurosport)
Weeraryahanka Wolves Patrick Cutrone, oo 23 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu heshiis amaah ah ugu biiro kooxda Valencia inta ka harsan xilli cayaareedkan, kaddib markii uu heshiis amaah ah oo uu kula joogay kooxda reer Talyaani ee Fiorentina uu soo dhammestay xilli hore. (Mail)
West Brom ayaa ogolaatay inay la soo saxiixato xiddiga Celta Vigo ee Okay Yokuslu, oo 26 jir ah, inkastoo ay u baahan yihiin inay ku qanciyaan cayaaryahanka khadka dhexe ee Turkiga inuu yimaado The Hawthorns. (RMC)
Weeraryahanka Everton iyo Turkiga Cenk Tosun, oo 29 jir ah, ayaa doonaya inuu amaah ugu laabto kooxdiisii ​​hore ee Besiktas. (NTV Spor, iyada oo loo marayo Goal – af Jarmal)
Goolhayaha reer Denmark Jonas Lossl, oo 31 jir ah, ayaa ka tagaya kooxda Everton isla markaana dib ugu saxiixaya kooxdiisii ​​hore ee FC Midtjylland. (Liverpool Echo)